မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 တတိယလှိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး… – PVTV Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 တတိယလှိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာရန်အချက်များကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်တို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း အပိုင်း(၂) ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 15K Share – 3585
Nay Phyu says:
2021-07-01 at 4:36 PM
2021-07-01 at 4:55 PM
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဆရာ
Khin Nan Hteik says:
2021-07-01 at 4:56 PM
ဆရာကြီး နှစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်ပါမယ်ဆရာကြီး
2021-07-01 at 5:30 PM
2021-07-01 at 6:20 PM
“ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မြောက်ကြွ မြောက်ကြွနဲ့
ပြောတာလေး ချစ်လိုက်တာ ဆရာရယ်
NY Hnin Sat says:
2021-07-01 at 6:31 PM
ပြောတာလေး ချစ်လိုက်တာ ဆရာကြီးရယ်🥰
2021-07-01 at 6:34 PM
ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး ပြောသွားတာ အရမ်း အားရတယ် ကျေနပ်တယ်
2021-07-01 at 7:08 PM
ပြည်သူ့အစိုးရရဲ့ ကျေးဇူးတွေ နွေးထွေးမှုတွေ ပြည်သူတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်မှုတွေ သတိရမိ တန်ဖိုးထားမိပါတယ် အားငယ်မိကြတာတော့ အမှန်ပါပဲရှင်
2021-07-01 at 9:48 PM
Waii Lyan Nhin says:
Khin Yu Yu Mon says:
2021-07-01 at 10:15 PM
အခုခ်ိန္မွာ အေမနဲ႔ဆရာ ႀကီးတို႔ရဲ့ ေမတာေစတနာမ်ားကိုပဲ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလံုး လိုလားေတာင့္တေနၾကပါတယ္။အေမနဲ႔ဆရာႀကီးမ်ား က်နိးမာၾကပါေစရွင္🙏🙏🙏
Zin Si says:
2021-07-02 at 7:21 AM
Forever respect ပါ ဆရာကြီးများ
Jannie Kai says:
2021-07-02 at 7:54 AM
Thank you so much for your valuable information. Best respect to Sayar U Zaw Wai Soe!
2021-07-02 at 8:00 AM
အမေ သင်ထားတဲ့အတိုင်း လူတိုင်းလူတိုင်း Masks ချုပ်ရမယ်။ Masks တပ်ရမယ်။
Khine Khine Myint says:
2021-07-02 at 8:22 AM
Mask လဲမတပ် ကြတော့ ဘူး ဆရာ ရေ
2021-07-02 at 9:41 AM
ဆရာကြီးတို့၏​မေတ္တာ ​စေတနာ ဂရုဏာ တို့​ကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ ကိုဗစ်ရန် စကစ ရန်များမှကင်း​ဝေးကြပါ​စေ အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်ရမည်💪💪💪
ဆရာကြီး ဇော်ဝေစိုး ပြောတာမှန်တယ် အဲ မြောက်ကြွမြောက်ကြွ အကောင်တွေ ကို ကူးနေတာ ကူးလည်းကူးမှာ တရားသော ဘက်ကပြည်သူတွေ ကို မကူးဘူး🙂🙂
Saw Kalyar Aung says:
2021-07-02 at 10:40 AM
ဆရာဇော်ဝေစိုး ပြည်သူအပေါ် ထားတဲ့စိတ်ကို အံ့မခန်း မြင်တွေ့ရပါတယ်
2021-07-02 at 11:40 PM
CDM အစိုးရဆရာဝန် နဲ့ CDM ပြည်သူ့ဆေးရုံပိတ်ခြင်း CDM ပြည်သူ့ဆေးတက္ကသိုလ်ပိတ်ခြင်း
အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့် အမျိုးသားရေးဝါဒ စနစ် ဖျက်ဆီးခြင်း
CDM အစိုးရဆရာဝန် နဲ့ CDM ဆေးရုံပိတ်ခြင်းသည် အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်
CDM ဆေးရုံ အတင်းအဓမ္မပိတ်ခြင်းသည်
အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်
ထိုအတွက် ပြင်ပဆေးကုသစားရိတ်မတတ်နိုင်သော ပြည်သူအများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရ
နာမကျန်းပြည်သူများ ပိုမိုသော ဝေဒနာထိခိုက်ရသည် သေကျေပျက်ဆီးရသည်
အခမဲ့ ပြင်ပ ပရဟိတဆေးခန်းဆိုသည်မှာ
Morally အကြောင်းပြချက်ပေး လှည့်စားရန် သက်သက်သာ ဖြစ်သည်
ပြည်သူ့ဆေးရုံ ပိတ်၍ ပြည်သူ့လမ်းဘေးပရဟိတဆေးခန်း သည် နှိုင်းယှဉ်၍ အယောင်ပြ၍ မရကြောင်း ပြည်သူကောင်းကောင်းသိသည်
CDM အစိုးရဆရာဝန် နဲ့ CDM ဆေးတက္ကသိုလ် အတင်းအဓမ္မ ပိတ်ခြင်းသည် အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်
အခမဲ့ ပြင်ပ online ဆေးပညာသင်ကြားခြင်း ဆိုသည်မှာ
ပြည်သူ့ဆေးတက္ကသိုလ်ပိတ်၍ ပြည်သူ့ digital လမ်းဘေး online ဆေးပညာသင်ပေးခြင်းသည် နှိုင်းယှဉ်၍ အယောင်ပြ၍ မရကြောင်း ပြည်သူကောင်းကောင်းသိသည်
အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များ ပျက်ဆီးရန် ဖြစ်သည်
အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များ သည်
အမျိုးသားရေးဝါဒ စနစ်တခု ဖြစ်သည်
မြန်မာတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒ စနစ်
ထိုစနစ်အောက်ရှိ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များ
ပြင်းထန်သော အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်
မြန်မာတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒ စနစ် အလုံးစုံပျက်ဆီးရန် ဖြစ်သည်
မြန်မာတွင် စနစ်ပြောင်း ခေတ်ပြောင်း လစ်ဘရာ တော်လှန်ရေး
အစွန်းရောက် ဝါဒီ ဖြစ်သည်
အစွန်းရောက်- အကြမ်းဖက် – စစ် ဖြစ်သည်
အစွန်းရောက် လစ်ဘရာဝါဒ ဖြစ်သည်
အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့် အမျိုးသားရေးဝါဒ စနစ် ဖျက်ဆီးခြင်း လုပ်ရပ်ဖြစ်သော
CDM အစိုးရဆရာဝန် နဲ့
CDM ပြည်သူ့ဆေးတက္ကသိုလ်ပိတ်ခြင်း ကို
သူတို့သည် မိမိဘဝဖြင့် နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ ဖြစ်သည်
ထိုသူတို့သည် တာဝန် ဝတ္တရား ပျက်ကွက် တာဝန်မဲ့သော်လည်း
အဖျက် အကြမ်းဖက် သဘော မဟုတ်ကြ
သူတို့လည်း victims များသာ ဖြစ်ကြသည်
ရပ်တန့်က အလုံးစုံ ချက်ချင်းရပ်ပါ
2021-07-04 at 2:39 PM
Naw Eh May Htoo says:
ဆရာကြီးတို့ NUG ကိုယ်စားပြု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်သူတွေကို ညွန်ကြားပေးပါဆရာ။
လမ္းျပ ျကယ္ says:
2021-07-04 at 10:38 PM
Spring Metta says:
2021-07-05 at 8:05 AM
2021-07-05 at 8:29 AM
လူ ေမာ္ says:
မအေလိုးက အရေးထဲ မျက်ရည်ခြူ
နေပြန်သေးတယ် ခင်ဗျားတို့ လူပိန်းကြိုက်
ပြည်သူ တွေ ဒီလောက်ရုန်းကန်ပေးနေတာ
တောင် စစ်ခွေးတွေလုပ်သမျှ အခုလို
Ko Htay says:
2021-07-05 at 1:06 PM
2021-07-06 at 12:08 AM
2021-07-06 at 7:25 PM
HlaHla Phuu says:
2021-07-07 at 12:39 PM
ဆရာ​ရေ Covid က နီနီ စိမ်းစိမ်း ဝါဝါ ပြာပြာ မသိပါဘူး ခု က​လေးမှာ အနီ​ရော အစိမ်း​ရော အဝါ အပြာ ကူးစက်​သေ​ကြေ​နေကြတာပါ ဆရာက အပြင်ထွက်စရာမလို​ပေမယ့် အပြင်ထွက်ရှာမှ ထမင်းစားရမယ့် ဆရာတို့ကို ​ထောက်ခံသူ​တွေ ရှိ​နေပါတယ် ဒီစကားအတွက် ထပ်အထင်​သေးမိတယ်
နန်းမတော် မယ်မြ says:
သူ့ မယားပြောသွားတဲ့ ပိတ်စ နဲ့ mask က ငဗစ်မကူးဖူးတဲ့လား
2021-07-08 at 11:05 PM
2021-07-10 at 1:15 PM
Sann Sann says:
2021-07-14 at 2:22 PM
2021-07-15 at 6:13 PM
ကူးတဲ့ သူ တွေ က ယွနေတာပေါ့နော် အဲ့တာဆို
တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် ကိုယ်ရယ်၊ မင်းရယ်၊ ပန်းပိတော…